घाँस काट्दै गर्दा ढिस्काे खसेर आमा छाेराकाे ज्या*न गयाे – ईमेची डटकम
घाँस काट्दै गर्दा ढिस्काे खसेर आमा छाेराकाे ज्या*न गयाे
काठमाडौं : ललितपुरमा ढिस्कोले पुरेर दुई जनाको ज्या*न गएकाे छ । शनिबार बिहान घाँस काट्न गएको समयमा माथिबाट आएको ढिस्कोले पुर्दा ललितपुर स्थित महाङ्काल गाउँपालिकामा आमा-छोराको ज्या*न गएकाे हो।
ज्यान गुमाउनेमा महाङ्काल १ बुखेल,खरिडाँडाका पानमाया लो र सन्दीप लो रहेका छन्। यस्तै सोहि गाउँपालिकाको कोसिवनडोलमा पहिरोमा पुरिएर एक पुरुषको पनि ज्यान गएकाे छ । पहिरोमा पुरिएर कोसिवनडोलका अबिरल गोले तामाङको ज्यान गएकाे हो।
अविरल वर्षा पछिको बाढी र पहिरोको कारण दक्षिण ललितपुरमा शनिबार सम्म मृ*त्यु हुनेको संख्या ६ पुगिसकेको छ। देशभरी धनजनकाे ठूलाे क्षति भैरहेकाे छ ।
पछिल्लो समय बजारमा प्लाष्टिकको चामल आईरहेको कुरा हामीले जताततै सुनिनछ । प्लाष्टिकको चामल बेचेको बहानामा केहि व्यापारीहरु पक्राउ परेको समाचारहरु पनि आइरहन्छन् ।
नक्कली चामलको प्रयोग स्वास्थ्यका लागि निकै नै हानिकारक छ। यसले प्रजनन प्रणलीमा बाधा पुर्याउनुका साथै पेटसम्बन्धि विभिन्न समस्याहरु निम्त्याउँछ। त्यसैले तपाईंले प्लाष्टिकको चामलबारे थाहा पाउन निकै आवश्यक छ।
यस बारे सावधान गराउन आज हामी तपाईंलाई प्लाष्टिकको चामल हो वा होइन भनि छुट्याउने सजिलो तरीकाका बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौं । यस्ता छन् ४ सरल तरिका ः
१. एउटा चम्चामा तेल हालेर तातो बनाउनुहोस् र प्लाष्टिको चामल भए तैरिन शुरु गर्छ।
२. एक चम्चा चामललाई एक गिलास पानीमा हालेर राम्ररी चलाउनुहोस्,प्लाष्टिकको चामल हो भने तैरिन थाल्छ।
३. थोरै चामलाई पकाउनुहोस्, यदि कन्टेनरमाथि कुनै मोटो पत्र जमेको देखिन्छ भने त्यो प्लाष्टिकको चामलको कारणले हुन् सक्छ।
४. थोरै चामल लिएर त्यसमा सलाईंको काँटीले आगो लगाउनुहोस्। यदि त्यसबाट जलेको बास्ना आयो भने प्लाष्टिकको चामलको कारण हुन्सक्छ।
श्रीकृष्णको निधनपछि अर्को बिबाह गर्ने मुडमा नायिका स्वेता खड्का, कस्तो पुरुष हेरिन् ?
दुर्भाग्य भन्नुपर्छ विवाहको एक महिनामा नै स्वेताका श्रीमान श्रीकृष्णले स्वता अनी संसार छोडेर विदा भैसकेका थिए । त्यसपछि विक्षिप्त बनेकी श्वेता अहिले नयाँ जीवन बाँचिरहेकी छिन्, उनलाई उनको परिवारले पनि खुबै साथ दिएको छ । बुहारी भए पनि उनलाई छोरीको रुपमा हेरिएको छ ।
पछिल्ला दिनहरुमा उनको स्वास्थ्यमा पनि केही समस्या आएको बताइन्छ । तत्काल उनी ‘श्वेता श्री फाउन्डेसन’मार्फत माझी बस्ती निर्माणमा थिईन । उनले यस्ता सामाजिक कामहरु गर्न थालेको पनि धेरै समय भएको छ । उनले केही सहयोग त धेरै आफैंले रकम जुटाएर वस्ति निर्माण गरेको विषय सबै तिर तारिफ गर्न लाएक छ । उमेरले झण्डै ३० वर्ष पुगेकी स्वेतालाई अहिले जीवन धेरै लामो भएको जस्तो लाग्छ ।
अहिले उनी श्रीकृष्णको यादको सहारामा जीवन बाँच्दै आइरहेकी छिन् । उनलाई लागेको थिएन कि उनका श्रीमानले बीचमा नै छोडेर जान्छन् । तर दैवको लिला अपरम्पार उनले यो संसारलाई विदा गरेको लामो समय भएको छ । खड्का र नेवारका बीचमा विवाह त्यती सहज थिएन तर त्यो उनिहरुले सम्भव गराएका थिए । उनी अबको यात्राका बारेमा केही भन्न सक्ने अवस्थामा नभएको बताउँछिन् ।
उनी अहिले आफुलाई नयाँ स्वेताको रुपमा देख्न सक्ने भएकी छिन् । विवाहको केही समय पछि श्रीमानको मृत्यु हुँदा वास्तवमा एक श्रीमतीका लागि पिडादायक हुन्छ । उनी अहिले हरेक नयाँ कुराहरु गर्न खोज्दैछिन् । उनको विवाह २३ असारमा भएको थियो । हरेक वर्षको असार २३ स्वेतालाई खुबै याद आउँछ तर उनले अतित भुल्ने प्रयत्न नगरेकी भने होईनन् । उनले नारायण गोपालको गीत झैं मुटुमाथि ढुंगा राखेर आँस्ने गरेकी छिन् ।
उनी विगत बिर्सेर केही फरक अनी नयाँ गर्न संधै तत्लीन हुने गर्छिन । उनलाई यो स्थानसम्म ल्याउनको लागि उनै जनताका प्यारा नायक श्रीकृष्णको भरपुर भुमिका रहेको छ । उनी भन्छिन, ‘मैले उहाँलाई बिजनेशमा ल्याए उहाँले मलाई चलचित्रमा लिनुभयो ।’ श्रीमानको मृत्यु पछि हाम्रो समाज साँघुरो छ । स्वेताजस्ता महान नारी तर एकल भएकै कारण कुरा काट्ने गर्दछ । एकल महिलाप्रति हाम्रो सामाजिक दृष्ट्रि सही हुन नसकेकोमा उनलाई दुःख लाग्छ ।
विवाह नगरेर एकल हुने र विवाहपछि एकल हुनेहरुमा समाज धेरै भिन्नता गर्न जान्दछ । कतै रमाइलो गर्दा, पार्टीमा जाँदा, केटा मान्छेहरूसँग यात्रा गर्दा, आफ्नो बिजनेस पार्टनरसँग मिटिङ हुँदा पनि समाजमा मान्छेहरु कुरा काट्न थाल्छन । आज श्रीमान भएको भए आफुलाई अहिले भइरहेको असहजा हुँदैन्थ्यो कि भन्ने स्वेतालाई समयसमयमा नलागेको पनि होईन् ।
तर उनी अहिले एक्लै बाँच्न प्रयास गर्दैछिन् । तर उनले जीवन र संर्घष अनी नेपाली समाज नदेखेको पनि होईन । एकल महिलाप्रतिको नजरलाई दुर गर्नको लागि पनि उनलाई अर्को विवाह गरौं जस्तो लाग्छ । यदि उनको विवाह भइहाल्यो भने श्रीकृष्णलाई अनादार गर्ने वा उनको स्थान लिन खोज्नेसँग विवाह हुन सक्दैन् ।
उनी भन्छिन्, ‘मेरो नयाँ घरमा पनि उहाँ (श्रीकृष्ण) को तस्बिर राख्न पाउनुपर्छ ।’ उनले अगाडी अर्को सर्त राखेकी छिन्, ‘उहाँ (श्रीकृष्ण) को जन्मदिन हरेक वर्ष सेलिब्रेट गर्न छुट दिने मान्छे आए विवाह गर्छु ।’ उनले उनको विगत स्वीकार र सम्मान गर्न नसक्नेसँग विवाह गर्न नसक्ने बताईन् । उनलाई धनले, रूपले कुनै प्रभाव पार्न सक्दैन् । मन राम्रो भएको मान्छेसँग अवश्य जोडिने उनको इच्छा रहेको छ ।